News – King Of Future
1 Comment	/ News / By codexmyanmar
?? Mayလ(29)ရက် Friday မြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လယ် (3:30)အချိန်တွင် Mayလအတွက် European Consumer Price Index (CPI) YoY သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Mayလ(29)ရက် Friday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(7:00)အချိန်တွင် Marchလအတွက် Canada Gross Domestic Product (GDP) MoM သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Mayလ(29)ရက် Friday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(9:30)အချိန်တွင် United States Federal Reserve Chair Powell Speaks သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ? Dataထွက်ရှိသည့်အခါ အထက်ပါငွေကြေးအတွဲများ လှုပ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ❤️❤️❤️ Traders များအကျိုးအမြတ် ရကြပါစေ။
သြစတြေးလျဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီ Ena Respiratory ကပြောကြားရာမှာ ၎င်းသည်အအေးမိခြင်းနှင့်တုပ်ကွေးရောဂါတိုက်ဖျက်ရန် နှင့် လူ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုတိုးတက်စေရန် nasal spray(နှာခေါင်းမှုန်spray) ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး မကြာသေးမီကတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုတွင် coronavirus ရဲ့ အားကောင်းမှုကို သိသိသာသာ အားလျော့သွားစေခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ INNA-051 ဟုခေါ်သည့်ထုတ်ကုန်ဟာ ကာကွယ်ဆေးများနှင့်ထပ်တူထပ်မျှအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် COVID-19 ဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည်။အဆိုပါလေ့လာစမ်းသပ်မှုကို ဗြိတိသျှအစိုးရအေဂျင်စီ Public Health မှ ဦး ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ INNA-051 အားစမ်းသပ်မှုများအရ လေးလမပြည့်မီ စမ်းသပ်မှုများဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတည်ပြုပြီးသည်နှင့် အဆင်သင့်ဖြစ်မည်ဟု သိရှိရသည်။Nasal spray စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကုမ္ပဏီဟာ ဒေါ်လာ ၁၁.၇ သန်း (ဒေါ်လာ ၈.၂၄ သန်း) …
ဩစတေးလျကုမ္ပဏီက ၎င်း၏ nasal sprayဟာ တိရစ္ဆာန်များနဲ့စမ်းသပ်မှုမှာ coronavirus ကြီးထွားမှုကို လျော့ကျစေသည်ဟု သိရှိရ Read More »
31 Comments	/ News / By codexmyanmar
– သောကွာနေ့မှနျးလှဲပိုငျးက အာရှတှငျ ဒေါျလာစြေးအားကောငျးနသေဖွငျ့ ရှှဈေေးကဆြငျးခဲ့ပွီး အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏ အထှကျနှုနျးမွင့ျတကျမှုက ရှှကေို ဖိအားသကျ ရောကျစခေဲ့ပါတယျ။ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြားသညျ အရေးကွီးသော US ငှကွေေးဖောငျးပှမှု Dataအခကြျအလကျမြားထုတျ ပွနျမညျ့အခြိနျကို စောငျ့ဆိုငျးနကွေပါတယျ။ – ကွာသပတေးနေ့တှငျ အမရေိကနျဒေါျလာ 1900 ထကျကြောျလှနျပွီးနောကျ ရှှသေညျ 0.08% ကဆြငျးခဲ့ပါတယျ။မြားသောအားဖွင့ျရှှနှေငျ့ပွောငျးပွနျ ဖွဈ သည့ျ ဒေါျလာတနျဖိုးသညျသောကွာနေ့တှငျတကျသှားပွီးအမရေိကနျ ၏ 10 နှဈတာဘဏ်ဍာရေးအထှကျနှုနျးသညျ 1.167% အထိမွင့ျတကျခဲ့ပါတယျ။ – ကွာသပတေးနေ့က US တှငျထုတျပွနျသောအခကြျအလကျမြားအရ ကန ဦး အလုပျလကျမဲ့တောငျးဆိုမှု 40600 ကိုတဈပတျလုံးတငျသှငျးခဲ့ပါတယျ။ US GDP သညျ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ပထမသုံးလပတျတှငျ 6.4% လေးပုံတဈပုံတိုးတကျခဲ့ပါတယျ။ – ယခုအခါရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြားသညျငှကွေေးဖောငျးပှမှုဖိအားကိုတိုငျးတာနိုငျရနျအတှကျ အဓိကပုဂ်ဂိုလျရေးသုံးစှဲမှုအသုံးစရိတျစြေးညှနျးကို ထုတျပွနျရနျစောင့ျဆိုငျးနကွေပါတယျ။ – …
ရွှေဈေးအကျ ဒေါ်လာဈေးအတက် Read More »
U.S Mayလ(28)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(7:00)အချိန်တွင် United States Gross Domestic Product (GDP) QoQ သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ U.SMayလ(28)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(7:00)အချိန်တွင် Aprilလအတွက် United States Core Durable Goods Orders MoM သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ U.SMayလ(28)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(7:00)အချိန်တွင် United States Initial Jobless Claims သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ U.S Mayလ(28)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(8:30)အချိန်တွင် Aprilလအတွက် United States Pending Home Sales MoM သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ U.S Mayလ(28)ရက် Thursday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(9:30)အချိန်တွင် United …
သမျမတ Joe Biden သညြ ဗိုငြးရပဈြ၏ မူလအစ အဖှမွေားကို ရှာဖှရနြေ COVID-19 ကို ဖှဈပေါစြသညေ့ြ စဈ ဆေးခကွြ မွားရှာဖှရနေအြမိန့ပြေးခဲ့ပါတယြ။ – ထောကလြှမြးရေးအဂငွေစြီမွားသညြ ဖှဈနိုငခြှမွေားကိုစဉြးစားနသေောလြညြး ၎င်းငျးငြးတို၏ကောကခြကွခြမွှုအပေါြ ယုံကှညမြှုကငြးမဲ့နဆေဲဖှဈပါတယြ။ – သမျမတ၏ စာတှငြ ဖောပြှထားခကွအြရ coronavirus သညကြူးစကခြံထားရသောတိရိဈဆာနနြှင့လြူတိုထိတှေ့မှုမှဖှဈစေ၊ ဓာတခြှဲခနြးမတောတြဆမှုမှဖှဈစပေေါပြေါကလြာခှငြးရှိမရှိ အသေးစိတကြို မတလြကသူ၏အဖှဲအားမေးမှနြးခဲ့ပါတယြ။ – ဗိုငြးရပဈြသညြ သဘာဝမဟုတဘြဲ တရုတသြုတသနေဓာတခြှဲခနြးမှထှကပြေါလြာခှငြးဖှဈနိုငသြညြ ဟူသောသီအိုရီတဈခုကိုလညြးယုံကှညနြပေါတယြ။ – အမရေိကနပြှညထြောငစြုရှိ တရုတသြံရုံးက ဒီကိဈစကိုနိုငငြံရေးအရ COVID-19 ၏မူလအစနှင့ြ ပတသြကြ၍ စုံစမြးစဈဆေးမှုမွားသညြ နှောင့နြှေးစလေိမ့မြညဟြုကှာသပတေးနေ့တှငပြှောကှားခဲ့ပါတယြ။ – တရုတနြိုငငြံအနဖှငေ့ြ ကမျဘာတဝှမြးရှိ COVID-19 ဖှဈပှားမှုမွားအားလုံးကို ပှည့ပြှည့စြုံစုံလေ့လာရနနြှင့ြ ကမျဘာတဝှမြးရှိ ဇီဝဗဒဆေိုငရြာဓာတခြှဲခနြးအခွိုကို စေ့စေ့စပစြပြ စုံစမြးစဈဆေးမှုမွားပှုလုပရြနြ ထောကခြံကှောငြး၎င်းငျးငြး၏သံတမနကြပှောကှားခဲ့ပါတယြ။ – Covid-19 …
Coronavirus ၏ မူလဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေရန် သမ္မတ Joe Biden အမိန့်ပေး Read More »